चिकित्सक सहकर्मीकै लापरबाहीले मृत्यु भएका डा. सिंहको परिवारले कहिले सम्म पाउने न्याय « Name of Truth News : News Portal in Nepal
चिकित्सक सहकर्मीकै लापरबाहीले मृत्यु भएका डा. सिंहको परिवारले कहिले सम्म पाउने न्याय
प्रकाशित मिति : २०७७, आश्विन, १७, शनिबार २१:१९
भैरहवा | भैरहवामा रहेको युनिर्भसल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज अस्पतालमा कार्यरत अर्थोपेडिक सर्जन डा. ज्ञानेश्वरप्रसाद सिंहको सोही अस्पतालमै कार्यरत चिकित्सकको लापरबाहीले २ माघ २०७६ मा मृत्यु भयो । १० वर्षदेखि युनिर्भसल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (युसिएमएस) मा कार्यरत सिंह १० भदौमा खसीको मासु खाँदा राति घाँटीमा हड्डी अड्किएपछि सोही अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।
प्रज्वल र उनकी बहिनी प्रज्ञा सिंह बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत छन् । कोरोना महामारीले गर्दा पढाइ बन्द भएपछि उनीहरू अहिले नेपाल आएका छन् ।- शिलापत्रबाट